कृष्णमुरारी अनि भए चट्याङ मास्टर - Naya Patrika
कृष्णमुरारी अनि भए चट्याङ मास्टर
कृष्ण कट्टेल/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १९ पुस | पुष १९, २०७४
व्यंग्य हान्ने उनको खास काम । कविता र लेख–रचनामार्फत उनी असामाजिक, अराजनीतिक चरित्रविरुद्ध कसेर व्यंग्य हान्छन् । कामजस्तै छ नाम, चट्याङ मास्टर । तर, हास्यव्यंग्यले भरिएका कविता तथा लेखरचनाका चार पुस्तक मात्रै समाज बदल्ने उनको योगदान होइन । सिस्नुपानी नेपाल, एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल र एजिङ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उनी कुनै वेला कृष्णमुरारी गौतमका नामले चर्चित थिए । कुष्णमुरारीबाट चट्याङ मास्टर कसरी भए, किन भए ? नयाँ पत्रिकाका कृष्ण कट्टेलले उनीसँग कुराकानी गरेपछि फिचर तयार पारेका छन् :
सपनाले मान्छेलाई डोहोर्‍याउँछ या मान्छेले सपनालाई ? यो प्रश्न बडो गम्भीर छ । जे होस्, सपना पूरा नगर्दै मान्छे बीच बाटोमै छुट्न सक्छ । अनि, छुट्न सक्छ, जीवनसँगै यात्रारत सपना ।
जीवनको सुभारम्भमा मस्तिष्कले पक्डिएको अनेक प्रकारका सपनाले कतिपयलाई सफल बनाइदिन्छ । तर, कतिपय उद्देश्य नै परिवर्तन गरेर अर्कै सपनामार्फत सफलता चुमेका उदाहरण छन् । दोस्रो उदाहरणसँग मिल्ने एक पात्र हुन्, हास्यव्यंग्यकार कुष्णमुरारी गौतम अर्थात् चट्याङ मास्टर ।
हुन त कलिलो मस्तिष्कले मास्टर बन्ने रहर बुनेको रहेछ । त्यसवेलाको कालोपाटीमा सेतो चक कुदाएर ज्ञान बाँड्ने मास्टर उनलाई खुब मन पथ्र्यो रे ! मास्टर बन्ने सपनामा दौडिँदै गर्दा उनले कहिल्यै पढ्न अल्छी गरेनन् । तर, स्कुले मास्टर बन्ने धोको बोकेका उनी जीवन गतिसँगै मास्टर त बने, तर ‘चट्याङ मास्टर’ ।
यी मास्टरको नामले खुब वाहवाही पाएको छ । सबैले चिन्ने यही नाम उनलाई पनि प्रिय लाग्छ, आजकाल । भन्छन्, ‘जीवनमा आफूले जे कमाएँ, यही नामबाट । त्यसैले, प्रिय लाग्छ, मलाई ।’
६४ वर्षअघि भक्तपुरमा जन्मिएका उनलाई हजुरआमाले नाम राखिदिइन्, कुष्णमुरारी । जागिरको सिलसिलामा भारतमा रहेका बाबुसँगै बसेर अध्ययन अघि बढाएको सम्झना ताजै छ, उनको दिमागमा । औपचारिक शिक्षा नेपाल, भारत, अमेरिका, चीन, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलियाबाट अघि बढाएका उनको नाम पनि पढाइमा देश बदलेजस्तै बदलिँदै गयो । हजुरआमाले राखिदिएको कृष्णकुमारी नाम बज्रपाणी हुँदै चट्याङ मास्टरसम्म रहन पुग्यो । अध्ययनलाई दौडाए, नामलाई दौडाए र कामलाई पनि उत्तिकै ।
नेपालको पञ्चवर्षीय योजना स्वदेशी विज्ञहरूले नै लेख्न आरम्भ गर्ने ‘पहिलो ब्याच’का कर्मचारी हुन्, उनी । २५–२६ वर्षको उमेरमा उनी देशका योजनाहरू कोर्थे । तर, काममै घोत्लिएर अगाडि बढ्न उनी यसकारण सकेनन् कि उनी चियागफ गरेर बढीजसो समय बिताउने कर्मचारीको हुलमा मिसिए । भन्छन्, ‘राष्ट्रिय योजनाका विषय, पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्नेजस्तो गम्भीर जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीले कामै नगरेको मैले पाएँ । गफगाफ गरेर दिन बिताउने प्रवृत्तिबाट म सन्तुष्ट थिइनँ । तर, पनि साथीभाइसँगै चियागफ गरिरहँदा मेरा कुरा सुनेर उत्साहित साथीहरूले पत्रपत्रिकामा लेख लेख्न उत्साहित गरे । अनि गफ लगाउने दुनियाँमा प्रवेश गरेँ ।’ व्यंग्यात्मक शब्द पत्रिकामा छाप्न थालेपछि उनले कृष्णमुरारी नाम बदलेर बज्रपाणी जुराए ।
उनले लेख रचनामार्फत सामाजिक परिवेश, समाज परिवर्तन गर्छु भन्ने सोच निकै पछि मात्र राखेछन् । आफूले अँगालेको हास्यव्यंग्य दुनियाँलाई सुरु–सुरुमा गफको दुनियाँका रूपमा बुझ्थे, उनी । भन्छन्, ‘योजना निर्माण गर्नेजस्तो गम्भीर जिम्मेवारीमा म हुँदा कसैले प्रशंसा गरेन । पत्रपत्रिकामा मैले हास्यव्यंग्य लेख, टिप्पणी तथा कविता लेख्दा भने सबैले तारिफ गर्न थाले । सुरुसुरुमा त गफैगफजस्तो लाग्थ्यो ।’
त्यसैले त, कृष्णमुरारी नाम राख्न डराएरै पत्रिकामा बज्रपाणी नाममा लेख छपाउँथे । के हास्यव्यंग्य कलाकारिता गफैगफको दुनियाँ हो त ? उनी अस्वीकार गर्छन् । उनले सामाजिक गतिविधिमाथि टिप्पणी तथा व्यंग्य लेखन प्रारम्भ गर्दाताका हास्यव्यंग्यमार्फत समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ र अभियान कमैको थियो ।
नेपालको विकासको क्रम तथा यहाँको व्यवस्थापन सुधार्न आवश्यक छ भन्ने आशययुक्त व्यंग्यात्मक लेख उनले २७ वर्षको उमेरमा लेखेका थिए । पत्रिकामा छापिएपछि उनले धेरै शुभचिन्तक पाए । धेरैले उनको तारिफ गरे । उत्साहित बज्रपाणीले एकपछि अर्को लेख मिडियामा पुर्‍याइरहे ।
साहित्य लेखनको सुरुवातमा उनले आफ्नो नाम बज्रपाणी राखे । उनलाई आफूले लेखेका लेख, रचना गफ मात्र लाग्थ्यो । त्यसैले वास्तविक नाम लुकाएका थिए । तर, बज्रपाणीबाट धेरैको वाहवाही पाउन थालेपछि यही नाम प्रिय लाग्न थाल्यो ।
विडम्बना ! उनलाई नै प्रिय बन्दै गएको नामप्रति तत्कालीन व्यवस्था पक्षधरको आँखा लाग्यो । उनी भन्छन्, ‘अहिलेझैँ त्यसवेला बडाहाकिम, नेता तथा कर्मचारी रक्सी बढी खाने, विदेश घुम्ने गरिरहन्थे । विदेश बस्दा हाकिमहरूले कतिसम्म दुस्चरित्र देखाउँछन् भनेर मैले लेखेको थिएँ । मेरो लेखको सीधा प्रहार राजसंस्थामाथि प¥यो । अनि, ममाथि जाइलाग्नेहरू बढ्न थाले ।’ सो कुराले राजसंस्थामाथि प्रहार भयो भनेर ममाथि जाइलाग्नेहरू बढ्न थाले ।’
त्यो समयमा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाह पढाइको सिलसिलामा लन्डनमा थिए । दीपेन्द्रले लन्डनमा ‘अरूमाथि दुव्र्यवहार गरेको’लगायतका खबर विभिन्न अखबारमा बाहिरिएका थिए । बज्रपाणीबाट चट्याङ मास्टर हुनुपरेको समय सम्झिँदै उनी सुनाउँछन्, ‘मलाई राजसंस्थाबाट लिनु र दिनु केही थिएन । कतिपय बडाहाकिम, नेतालगायतले विदेश गएपछि श्रीमतीलाई साडी किनेर ल्याइदिनैपर्ने तथा रक्सी खानैपर्ने, दुस्चरित्र देखाउनैपर्ने भन्ने मानसिकता राख्थे । सोही सोचाइप्रति मैले लेखेको लेख निकै चर्चित भयो । तर, राजसंस्थाविरुद्ध लेखियो, युवराज दीपेन्द्रविरुद्ध लेखियो भनेर मलाई धम्की दिनेहरू देखिए ।’
के चट्याङ मास्टर त्यो धम्कीबाट डराउने डरपोक थिए ? उनले त्यो वेलाको प्रसंग कोट्याइरहँदा मेरो मनमा प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक थियो । हास्यकवि न परे, भनिहाले, ‘सन्तानको शरीर भनेको बा–आमाको सम्पत्ति हो । मेरो ज्यान पुलिसको लात्तीमुंग्रा बजार्नका लागि थिएन । यसरी म असुरक्षित भएको महसुस गरेपछि लेख्नै छाडिदिएँ ।’
वाकपटुतामा निपुण चट्याङ मास्टर बोल्दै गए– त्यसवेला राजसंस्था, पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध कसैले बोल्यो कि पुलिसको लात्ती खानुपर्ने, झ्यालखाना जानुपर्ने हुन्थ्यो । मलाई त्यहाँसम्म पुग्नु थिएन । त्यही भएर लेख्नै छाडिदिएँ ।
त्यसपछि के भयो ? जिज्ञासा बढाएँ । उनले पनि हौसिँदै सुनाए, ‘एक–डेढ वर्ष लेखिनँ । तर, लेख्ने लतमा परिसकेको थिएँ । के लेखौँ, कसरी लेखौँ भइरहन्थ्यो । अनि, फेरि नाम बदलेँ । चट्याङ मास्टरको नामबाट लेख्न सुरु गरेँ । तर, पहिलेको नामसँगै तालमेल हुने नाम थियो, यो पनि । बज्र अर्थात् चट्याङ, पाणी अर्थात् मास्टर ।’
सुरुसुरुमा उनलाई चट्याङ मास्टर नामले पनि डर दिइरह्यो । कारण, बज्रपाणी भनेको चट्याङ मास्टर नै हो भनेर अरूले थाहा पाउन के बेर ? यो कुराले सशंकित चट्याङ मास्टरले एउटा कहानी सम्झिए, ‘पछिल्लो नामबाट पनि म ढुक्क थिइनँ । एकजना साथीले बज्रपाणी भन्ने नै चट्याङ मास्टर हो भनेर थाहा पाउन्जेल त नेपालबाट पञ्चायत व्यवस्था नै हट्छ भनेर सम्झाए । म यसमा सहमत भएँ, अनि यही नामबाट लेखनलाई निरन्तरता दिएँ ।’
बज्रपाणी नामले ०३६ सालतिर लेख्दै गर्दा उनले गद्यमा आफ्ना व्यंग्यात्मक विचार पोख्थे । चट्याङ मास्टरको नामबाट लेख्दा पद्यमा लेख्न थाले । कारण– बज्रपाणी र चट्याङ मास्टरको लेखन शैली एउटै नहोस् ।
सुरु–सुरुमा लेख्दा उनले राजनीति नबुझेरै लेखे । तर, सामाजिक विषयवस्तुमा कलम बढी चलाए । बिस्तारै राजनीति बुझ्दै गए र उनले सिंहदरबारलाई समेत आफ्ना व्यंग्यात्मक टिप्पणीमा उतार्न थाले । तर, आफूलाई सामाजिक परिवेश र जीवनशैलीमाथि नै लेख्न रुचाउने लेखकका रूपमा लिन्छन् । भन्छन्, ‘मैले लेखन प्रारम्भ गर्दै गर्दाका हास्यकवि कलाकारले कि सिंहदरबारभित्रको कि त कट्टुभित्रको मात्रै कुरा लेख्थे । सामाजिक परिवेश, दैनिकी तथा घरआँगनकै पात्र र चरित्रको पनि त लेख्न सकिन्छ नि भन्नेमा म लागिरहेँ ।’
लेखन कर्म अघि बढाइरहँदा कहिले कस्को जस, त कहिले कसको अपजस सहिरहनुपर्‍यो, चट्याङ मास्टरले । उनको दिमागमा लेखनकार्यका कवि कलाकार किन संगठित नहुने भन्ने सोच आयो । अनि, उनकै सोचमा जन्मियो, सिस्नुपानी । आफू संस्थापक अध्यक्ष रहेर ०५५ मा सिस्नुपानी नेपाल स्थापना गरे । राजनीतिक र सामाजिक व्यंग्य हान्न यो संस्था अहिले पनि क्रियाशील र चर्चित छ ।
उनले यति मात्रै गरेनन् । नेपालमा बढ्दो सूचना–प्रविधिको प्रयोग गर्दै आमबस्ती तथा आमजनतालाई सुसुचित तथा चेतनशील बनाउनुपर्छ भन्नेतिर गम्भीर भए । सधैँ हसाउन र चोटिलो लेख लेख्न मात्र उनी सीमित भएनन् । टेलिभिजन, रेडियो तथा पत्रपत्रिकामा निरन्तर आफूलाई उभ्याइरहे । कहिले टेलिभिजनबाट कार्यक्रम गर्ने, कहिले रेडियोमा बोल्ने त कहिले पत्रपत्रिकामा लेख्ने । सोहीक्रममा आफैँ संस्थापक अध्यक्ष भएर स्थापना गरे, एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल । ‘मुलुकभर छरिएका सञ्चारमाध्यमलाई गुणस्तरीय तथा सामाजिक परिवर्तन, विकास बोल्ने तागत बोक्ने कार्यक्रम उत्पादन गरेर दिने सोच बनायौँ र मसहित केही साथीहरू मिलेर यो संस्थाको सुरुवात गर्‍यौँ,’ सुनाए ।
अचम्म त यो छ कि उनी आजभोलि साहित्य लेख्छन्, तर मायाप्रेम र बालसाहित्य मात्रै होइन । आजकाल ज्येष्ठ नागरिक साहित्य लेखन अघि बढाइरहेका छन् । ‘एजिङ नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्था खोलेर उनी ज्येष्ठ नागरिकको हकहितको पक्षमा बोलिरहेका छन् । बत्तिसपुतलीस्थित आफ्नै घरलाई कार्यालय बनाएर उनी ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा लेखिरहेका, बोलिरहेका छन् ।
पछिल्लो १० वर्षदेखि उनी ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी स–सम्मान बाँकी जीवन जिउने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्नेमै व्यस्त छन् । भन्छन्, ‘हामीले बालसाहित्य लेख्यौँ, मायाप्रेमको साहित्य लेखेर युवाको मन जुरुक–जुरुक उचाल्यौँ । मनमस्तिष्कलाई प्रफुल्लित बनायौँ । तर, अब ज्येष्ठ नागरिक साहित्य लेख्नुपर्छ । किनभने वृद्धवृद्धालाई सधैँ हरेराम हरेकृष्ण भन्न लगाएर वा कुनै धार्मिक ग्रन्थको पुस्तक थमाएर मात्र हुँदैन ।’ गफगाफ टुंग्याउँदै गर्दा उनले ज्येष्ठ नागरिकबारे लेखेको कविता सुनाए :
आऊ साथी बुढो होऊँ कुप्रिएरै भए पनि
हालौँ नयाँ नयाँ दाँत पुराना सब गए पनि
बुढो हुन सजिलो छ, जो पनि हुन सक्दछ
अरू केही गर्नुपर्दैन, नमरे मात्र पुग्दछ ।